Manomboka eo amin’ny tena aloha… | NewsMada
Manomboka eo amin’ny tena aloha…
Tena hahavaha olana amin’izao krizy politika izao ve ny fijoroan’ny governemantan’ny marimaritra iraisana? Baraingo mihantona etsy sy eroa io: mila valiny, antoka sy fahombiazana. Eo ny amin’ny fitadiavana filaminana sy fitoniana maharitra amin’izay, indrindra ny amin’ny fanatanterahana ny fifidianana hoe hatao ato ho ato.
Inona no eo? Mitohy ary roa vao mainka mihamafy aza ny hetsi-bahoaka eny amin’ny kianjan’ny 13 mey: mitaky ny fialan’ny filohan’ny Repoblika, mitaky ny fanalana ireo minisitra HVM. Manampy trotraka izany ny fitokonana sy ny fitakiana sendikaly: mitaky fanoloana minisitra, miady izay ho tombontsoan’ny mpiasa…
Amin’izany, manao antso avo mba hisian’ny fitoniana ny mpitondra. Aiza ho aiza? Eo koa ny fangatahana ny tsirairay handray andraikitra ho amin’ny tombontsoam-pirenena… Ahoana indray ny amin’izay? Tsy efa karazana fandraisana andraikitra ve, ohatra, ny fangatahana sy fitakiana fanovana amin’izay ahina… hitera-doza?
Iza no tsy mandray andraikitra amin’izany? Na manilika ny raharaha any amin’ny hafa… Anisan’ny fandraisana andraikitra ny fahaiza-mihaino. Tsy vokatry ny tsy fahaiza-mihaino na ny tsy firaharahana ny hafa ve no nahatonga izao raharaha izao? Natao amboletra ny lalàm-pifidianana efa notenenin-dava mialoha hoe hampikorontana.
Hanao ahoana koa ny amin’izay ho tohiny sy ny fiafaran’izao toe-draharaha izao? Mihamahery vaika ny fanoherana ireo minisitra HVM, roritina hatrany ny hoe marimaritra iraisana… Politika io, arakaraka ny fifandanjan-kery ary ny tombontsoa arovana sy iadiana. Eo koa izay ananan’ny tena tamberin’andraikitra: iza na mankaiza?
Mbola sarotra sy manahirana ny raharaha, dingana kely no vita amin’ny firosoana amin’ny filaminana sy fitoniana. Aiza ho aiza ny tena fandraisana andraikitra manomboka eo amin’ny tena? Mbola resaka hafa ny amin’ny firosoana hanatanterahana ny fifidianana hoe tena vaindohan-draharaha sy laharam-pahamehana.
Ao anatin’ny fotoan-tsarotra izao, tsy vita mora izay lazaina sy atao?